Ukuhlasela kobuphekula 24 Oktoberplein e-Utrecht, ukwethusa lonke ilizwe! : UMartin Vrijland
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	18 Matshi 2019	• 35 Comments
Kulo kusasa bekuza kubakho ukuhlaselwa kwamaphekula eUtrecht. Asikwazi into ekhoyo, ngaphandle kokuba sifunda, siva kwaye sibona amabali ebhozo kumaphephandaba. Kuza kubakho ukudubula kwi-tram kuyo 24 Oktoberplein. Kukho ukuhlaselwa kwiplati eTurumanlaan eUtrecht. Kukho nakala kubakho umculi we-1. Nangona kunjalo, kukho kwakhona amabali malunga nabaphambukeli be-4. Amapolisa ayekhangela i-Renault Clio ebomvu. Amapolisa akafuni ukusho nto malunga namaxhoba, kodwa amaxhoba aya kuthathwa esibhedlele esingxamisekileyo. Kwaye ke ibali liba likhulu kwaye lidideke ngakumbi. Zonke zivakala kakhulu kwaye zinzulu, kodwa mhlawumbi iinjongo.
Ibali elincomekayo le-mega kwaye ubuncinci sifumana ukuvakalelwa ukuba kusekho kwaye kwaye inokuthi ivele ikhupha nayiphi na ixesha naphi na. Asinakucwangcisi ubuchule bekhreditri kwaye asiyi kuthatha ingqalelo ngokubambisa ekukholeni, njengoko siboniswe rhoqo kwiziko, njengoko Umboniso wePegida-Antifa okanye kwi Zaanse vloggersrel éré (accommodation). Kwimeko nayiphi na into, amajelo asasaza kakhulu kwaye abantu bayabizwa ukuba balayishe nayiphi na irekhodi kwiwebhusayithi yamapolisa. Oku ngokwemvelo kunceda kakhulu kumfanekiso wokwethembeka. Akukho mntu uya kubuza ukuba imifanekiso elayishiwe yabathathi-nxaxheba kwi-PsyOp (ukusebenza kwengqondo) ingaba okanye mhlawumbi ifakwe kunye neprogram.
Elizweni liqhutywe nezikolo zemidlalo kunye Inoffizieller Mitarbeiter Unokuba lula ukubeka imeko elolo hlobo kwimeko, ngokukodwa xa ubeka ukuhlaselwa kwindawo apho kuvame ukuba khona abantu abaninzi. Lo mcimbi wokumisa indawo kunye nokuvumela iqela labadlali ukuba benze umsebenzi wabo. Ndinexhala elikhulu kwiimeko ezinjalo, kuba ngokuqhelekileyo i-max 'Ingxaki, Ukuphendula, Isisombululo'isebenza ngokupheleleyo. Qinisekisa ukuba kukho imeko engxaki, kubangele impendulo ngokusasazwa kwimidiya (apho abantu badlala kakhulu emoyeni) kwaye ucebisa isisombululo esichazela ngaphezulu 'iphoyisa lombutho kwi-jacket enobuhlobo'.
Siya kubona imifanekiso kwaye siza kuhlangabezana nendoda. Mhlawumbi oku kukuqala kokutshatyalaliswa kweTurkey ukusuka ekunene kunene ndibhengezile (bona eli nqaku). Okwangoku, kuthethwa nge-37-indoda yaseTurkey ebizwa ngokuthi iGökman Tanis. Ngaba siya kubona i-FETO iqhagamshelo endikhankanyileyo kwinqaku (malunga nokuhlaselwa eNew Zealand)? I-FETO yiqela le-terrorism ye-Fethullah Gülen, njengoko ichazwe yiTurkey.
Uninzi lwabantu aluyi kukwazi ukuqonda okanye ukuqonda ukuba oorhulumente, ngokubambisana nazo zonke iintlobo zee-arhente (kubandakanywa namapolisa kunye neendaba, imfundo yezemidlalo kunye ne-Inofizieller Mitarbeiter, njl.) Baya kukwazi ukubeka eso siganeko kwi-stage. Kungenxa yokuba abantu basakholelwa kwiZiqendu ezintathu zeendaba (i-Trumanlaan e-Utrecht ifanelekile kuloo mongo). Bambalwa baye baqwalasela iimeko ezibekwe kwindawo kwaye zichazwe apha kwisiza. Abantu abakwaziyo kwaye abanqweneli ukukholelwa ukuba oorhulumente, abemi kunye nabamaphephandaba bayakwazi ukukhohlisa izinto ukuze batshintshe umsebenzi, isikhwama semali kunye ne-alibi yokufezekisa 'injongo ephezulu'. Umkhosi we-social media we-troll olungele ukuhlaselwa nabani na ozama ukubuza umbuzo, ukudala uxinzelelo lweqela elifunayo.
Ziziphi izixhobo abafazi kunye nabazalwana abanalo? Ngokomzekelo, unako ukwenza abantu abangabikhoyo ukuba baqale kwi-software ye-AI.
Unokwenza amavidiyo angcolileyo.
Ungasebenzisa ubuchule bokusesikrini
Unako ukuqesha abadlali kunye nemibutho enjengamapolisa, izibhedlele kunye neendaba eziye zaphazamisa abantu abathatha inxaxheba ekusebenzeni. Ngubani owenza loo nto? Ngaba uyazi ukuba bangaphi abantu abaselumelwaneni bethu abasempuma benza zonke iintlobo zemisebenzi yoomatshini wepropaganda emashumi embalwa edlulileyo? Ngethuba nje abantu behlawulelwa kwaye banokuphakama, baninzi abaninzi abavumela ukuba ibhulukwe zenze ishishini kwaye bagcine iminyango yabo ivaliwe kwilizwe langaphandle. Ukuba awukholelwa oko, awufundanga imbali ngokufanelekileyo. Mhlawumbi uza kudlala kunye nomboniso wemidiya ukuze ugcine ukwesaba kuyo, ukuze ipolisa ikwazi ukuqhubeka ifake ngokwayo.
Iimbono eziphawulekayo ezivela kumntu othi "ungqina." de Telegraaf igama elithi Koster lathi into ebethayo:
De Koster: "Ndivela kum msebenzi xa kwenzeka. Ndimi kwizibane zendlela ze-24 Oktoberplein kwaye ndibona ibhinqa elele phantsi, ndicinga ukuba iphakathi kwe20 kunye ne-35 ubudala. Ngelo xesha ndava pang pang pang kathathu. Amadoda amane ayehamba ngokukhawuleza kuye kwaye bazama ukumtsala kwaye ndakuva pang pang pang kwaye abo bafana bayeka ukuhamba kuloo ntombi kwakhona. Iintlungu kakhulu. "
Ngoko ke lona wesifazane wayesele ekhona xa ukudubula kwenzeka? Ngqongqo. Uyazi oko. Enye ibali kwaye ngoko siza kuva amabali athile. I-Trumanshow kufuneka iqhubeke:
(Ulifunda kwakhona nqaku yangaphambilimalunga nokuhlaselwa eNew Zealand ukuze kuqondwe kangcono ukutshatyalaliswa kwangoku)
Uludwe lwekhonkco lovimba: telegraaf.nl, indebuurt.nl
tags: 24, 37, hlaselwa, umenzi wobubi, eziziimbalasane, Fethullah, FETO, zivile, mangqina, Gokman Tanis, Gülen, ubudala, Ndoda, Oktobha, izibhamu, loyiko, ukuhlasela koogorha, ulwabilo, tram, Trumanlaan, Turkish, Utrecht
18 Matshi 2019 kwi-14: 23
Ndiyazi ukuba unomdla wokubala.
18 Matshi 2019 kwi-15: 33
UHarry S. Truman wayengumbutho waseMerika owakhonza njengomongameli we-33rd wase-United States,
18 Matshi 2019 kwi-18: 04
I-33e degree, kubonakala ngathi i-Ides ka-Matshi iye yagqitywa ngamandla ngokuqinileyo. Makhe sibone ukuba singalindela ukuba i-22e ifike kwisiqhamo.
18 Matshi 2019 kwi-14: 54
18 Matshi 2019 kwi-14: 58
"Nantoni na, kutheni i-square ebizwa emva komhla we-24 Oktobha? Ngaba kwenzeka into ekhethekileyo ngaloo mini? Ewe! Ngo-Oktobha 24 1945, namhlanje ngokuyiminyaka eyi-73 edlulileyo, iZizwe eziManyeneyo zisekelwe. Kakade ngeengcamango zemfazwe zaqulunqwa ngenhlangano yomhlaba wonke elandela uxolo, ukhuseleko kunye nentsebenziswano phakathi kwamazwe. Emva nje kweMfazwe Yehlabathi Yesibili, ngo-24 Oktobha i-1945, ixesha lifikile: iManyeneyo iyinyaniso. "
Kwaye ke amapolisa afuna ukuba akukho mifanekiso ifakwe kumajelo asekuhlaleni: i-alibi yokucwangcisa isele isetyenziswe.
18 Matshi 2019 kwi-15: 19
Abenzi abadlali bafakwa kwindawo, kodwa banentlonelo yokuba abantu baqala ukuphosa
18 Matshi 2019 kwi-15: 22
Yintoni endingazibuzayo ukuba kwenzeka njani ukuba bonke abadlali bekhamera bafumaneke kuyo yonke indlu? Ngaba i-polish scanner ivule ngokugcwele ngexesha lophulo lokusongela ukwenzela ukuba ugqirha unakho ukuphulaphula kakuhle? Okanye ngaba abafazi neentloko bafumana isicatshulwa? "Yiza ku-huppelepup, ngoba siya kwenza enye into"
Yonke into ibonisa i-PsyOp.
Calvin wabhala wathi:
18 Matshi 2019 kwi-15: 36
Ngaba usayibona uxhulumaniso kunye nesiteleka samhlanje? Ngaba ucinga ukuba yinto engafanelekanga ukuba iindaba ziqhitshiswe phantsi ... okanye ngaba zikwazi ukusebenzisa isiteleka kulo mzekelo?
18 Matshi 2019 kwi-16: 06
Isiteyimu e-Amsterdam sinokuthi siqinisekise ukuba i-trams e-Utrecht yayingaphantsi ngokupheleleyo
18 Matshi 2019 kwi-16: 13
Ngoku ndiyabona ukuba yayisiteyathelo sesizwe, ngokunjalo nase-Utrecht.
Oku akukwazi ukuba yinto engahambelaniyo kwaye ngokungenakuqiniseka baqinisekisile ukuba abaninzi abahambi baye bafuna izithuthi ezahlukeneyo okanye bamthatha nje usuku. Kusoloko kushicilelwe kwangaphambili.
18 Matshi 2019 kwi-16: 14
Olunye uphawu lokuba sinokusebenzisana ne-PsyOp ecwangcisiweyo.
18 Matshi 2019 kwi-16: 36
Ngokuqinisekileyo, akunakuba yinto engathandekiyo ukuba le sitephambili esona sikhulu senzeke ngokuqinisekileyo ngosuku lo "tereur" isenzo.
18 Matshi 2019 kwi-18: 09
I-ofisi ye-ofisi ye-(semi) yombutho kaRhulumente wase-NS uhlala eUtrecht, ngoku kusihlwa siya kubona lo msebenzi waseYunivesithi yaseUtrecht eninzi
18 Matshi 2019 kwi-18: 55
Chris34 wabhala wathi:
18 Matshi 2019 kwi-16: 15
Amabali amaNgqina ayilunganga, abantu abaninzi bathetha ukuba baye bakuva izibhengezo, kubandakanywa abaqhubi.
Kwaye ke lo mdlali we-RTL. Izibhamu zazivakala kakhulu, u-Utrechter uthi. "Ndicinga ukuba kwakukho umququzeli kuyo. Esikhundleni seengxube ezivakalayo, ndandiva ukukhukhuthaza. "NgokukaDaan, kwakubonakala ngathi kuhlaselwa ngokucacileyo kuloo bhinqa.
Kuhle ukuba abahamba ngemoto kwinqanaba lezithuthi kunye nenqwaba yomsindo kwimoto yabo beva umntu ekuthungeni ngesithuli ....
18 Matshi 2019 kwi-16: 45
"Umasipala wase-Utrecht ngaphambili wacebisa abantu ukuba bahlale ngaphakathi. UVan Zanen: "Senza oko kuba sasicinga ukuba kwenzeka isiganeko sokudubula kwiindawo ezininzi. Akunjalo, ngoku siyazi ngoku. Omnye ummangali usemfanekisweni, bafunwa, akafiki ngaphakathi. Kukho na ukuba banokumangalelwa, kuze kube ngoku asikwazi oko. "
Ndicinga ukuba ezo trams zizele zizele iikhamera ukuze le ngxaki engacacileyo ingenye enye inkcazo ye-PsyOp.
18 Matshi 2019 kwi-17: 00
UMartin uyazi ngakumbi ngale nto?
Uhlaziyo lwe-16.24: Ngokwamangqina, umqhubi wabiza u-Allahu Akbar ngaphambi kokuvula umlilo kwi-tram. Umgibeli owayebiza ngokuba nguMorocco wasala yedwa, ngokweHet Parool. Sifuna ukwazi ukuba ngubani owamiselwayo ngowokuqala ukugxininisa ukuba akukho nto inxulumene ne-Islam.
Ngaba kwi xandernieuws
18 Matshi 2019 kwi-17: 18
Khangela ikhonkco yakho emva kokuba i-parole. Ibali elingaqhelekanga. AmaNgqina akhuluma nge-4 ababenzibambane abanezixhobo ezide kunye nompu ... .. Kodwa banomntu osesikweni se-1 engqondweni
18 Matshi 2019 kwi-17: 20
Nceda undincede andiyiqondi. Yintoni ebonisa ukuba izinto eza kwenzeka ntoni kuhlobene 'nobugandlo'? Kutheni kungabikho ngolwaphulo-mthetho oluhlelekile okanye imiba yothando?
Ngaba sonke sidibana malunga nabaphathi beentetho?
18 Matshi 2019 kwi-18: 54
Ndiyaqonda ukuba umenzi wobubi wabanjwa ngenxa yokubulala uzuko. "Abazingeli bamaphekula" beza kubamba ingonyama baza bafumana imouse. Uloyiko lwe-porno eHolland. Bhala i-fimscript kwaye uyithengise kwi-Hollywood. Liliphi ilizwe.
Uloyiko loononophelo eHollandia.
18 Matshi 2019 kwi-18: 15
Ndiyinto yonke yokugula yonke into, into enjalo inkohliso.
Ukuba ufuna ukugxininisa into enjalo, yenza kakuhle ke ungenzi nto ye-movie ehlekisayo.
Ukuba u-rutte akakwazi ukuzibamba. Kubi kangakanani
Kanye nje nomlingisi waseNewzealand ... phi iindawo ezijikelezayo kwibhola, apho igazi ludongeni ....
18 Matshi 2019 kwi-20: 57
Abafileyo babesele bahlala phantsi phambi kokuba intloko ifike kuLilenstein 3D.. kwaye ngoku yonke imifanekiso iyasuswa kwi-intanethi kakuhle
18 Matshi 2019 kwi-18: 22
Iigusha zisesaba kakhulu ngaphambi kokuba ukhetho lube lufuna umalusi olungileyo.
"Wonke amaqela ezopolitiko, ngaphandle kweForam yeDemokhrasi, ayimise ikhenyulo lonyulo ekuqhutyweni kweeNyulo zeBhunga kwiPhondo malunga nokuhlaselwa."
18 Matshi 2019 kwi-18: 40
Ngokukhawuleza ndifumana i-deja ivakalelwa. Khumbula umbuzo weso saza saseTurkey eyangena ngasese eNetherlands. Iimvuthu, njl. URutte wanqoba ukhetho. Wenze "ngokuzimisela" ngokumelene neeTurkey. Ibini likaRutte noErdogan emva koko?
18 Matshi 2019 kwi-18: 43
Ngokuqinisekileyo 😀 le Psyop ineendlela ezininzi kwaye enye yabo ..
18 Matshi 2019 kwi-18: 39
Ngaloo ndlela, ummangali we-PsyOp uyabanjwa. Okulungileyo ukuba sinaloo polisa omkhulu. Benza ntoni kakuhle, "oogxa"; "Abafana bethu". Amanyathelo oloyiko avelisa iziqhamo!
18 Matshi 2019 kwi-18: 50
Isinyathelo esilandelayo sinamanyathelo e-biometric, ngokuqinisekileyo asikwazi ukuvumela le nto ihambe ngendlela yethu .. U-Rutte uphakanyiswa kwi-Politburo eBrussels ukuze agcine iqabane lakhe kunye nenkampani yaseTimmermans. Amanyathelo aseburhulumenteni aseburhulumenteni asetyenziswa nge-EU ngokubambisana neFrontex, i-EUROGendfor ifakwe kwaye i-voila i-State State Police 2.0 imisebenzi njengobambiswano, kuba kuya kuphinda kwenzeke ukuze singalokothi sikhohlwe ...
18 Matshi 2019 kwi-18: 52
18 Matshi 2019 kwi-19: 54
Siyakwamkela kwi-jungle, i-chaos iya kuza. I-US ifaka iibhomu zenyukliya eYurophu kule iveki, ukuxhatshazwa kunye neTurkey kunokunyuswa kwakhona kweli hlotyeni, amaMelika ashiye isivumelwano se-INF kwaye ahlakulela imirhubhe engavumelekanga yokuhamba, ukuxhatshazwa okwaneleyo okuza kudala umkhosi we-EU ukujongana neebhatyi.
Ngendlela, ubonile oko kubhaliweyo kwiibhamu ze-New Zealand kuhlaselwa? Isifundo somlando kumakhulu eminyaka eYurophu nakwi-Ottoman Empire
18 Matshi 2019 kwi-21: 02
I-Breivik Tarrant Copy Copy eqeqeshwe ngabantu abaqhelekileyo abasolisayo abasebenzisa iBrevivi njenge-idiot efanelekileyo. Zonke iindlela zikhokelela kubasemagunyeni abaqhelekileyo ngaphandle kwe-Utrecht kunokuba bekufunyenwe i-mousetrap.
18 Matshi 2019 kwi-20: 31
I-France 2019, i-agenda ye-World Order agenda
Ukunyanzeliswa kukuba / kuyisitshixo kumandla abo ukuze yebo yonke into isenze sikholwe, asinakukwazi ukufumana ukukhohlama kwenkohliso ngexesha likaCharlie Hebdoo, ngokuqinisekileyo, izizwe eziye zambona yonke iCharlie Hebdoo ukudubula, kwalapha kule ndawo xutyushwa kakhulu.
Nils wabhala wathi:
Isithombeni sakho sisuka kuJohn Maes, eTelgraaf. Ikhasi le-Wikipedia le hlaselo sele lidalwa, ngokwenene, ngosuku, kunye nesithombe esifanayo. I-Wiki ayifaki iifoto ezithi i-copyright ayinayo. Ngamafutshane, siphinde sibone i-huddle yeenkonzo zeefihlakeleyo kunye neendaba kwi-encyclopedia yepropaganda yokulala eNetherlands. Ngoko i-100% yeflegi yefakeli.
19 Matshi 2019 kwi-11: 31
Akumangalisi ukuba umntu omele ukuba uvalelwe kwaye ulwaphulo-mthetho olusisigxina angalindela isigwebo ekhaya.
Emva koko ndifumana i-Folkert de G iingcamango.
Ndiyifumene ifile kakhulu, isihlobo esilandelayo kufuneka siphile nale nto.
Ndiyazi ukuba yintoni umthetho omtsha oza kuphuma kule nto.
Umthetho omtsha wokunciphisa ummi kodwa ungabinciphise ubugebengu, kuba kufuneka sikwazi ukuyisebenzisa.
Simele sikwazi ukuthetha ukuba umthetho ulungile.
Izopolitiko zimbi kodwa ubulungisa bubi nakakhulu !!
« Ukuhlaselwa kweNew Zealand: ukusekwa ngokuchanekileyo kokucandwa kwehlabathi lonke, ukungaxhatshazwa kwabantu kunye nokuhlengahlengiswa
Ummeli ogwetywayo uGökmen Tanis wabanjwa, mhlawumbi umdlalo weentsapho »
Iindwendwe ezipheleleyo: 10.832.929
Joyina amanye ama-1.612 ababhalisile